Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-trano » Ny fampifangaroana ny dia amin'ny asa lavitra dia mitombo hatrany
Travel Travel • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
TUI dia mitodika any amin'ny tsena hafa toa ny fironana mihombo ho an'ny dia mitambatra sy ny fiainana miasa lavitra rehefa mandefa fonosana 'workation' vaovao.
Noho ny areti-mandringana COVID-19 manerantany miasa ao an-trano izao dia fanao mahazatra ho an'ny maro.
Mety hitombo ny lazan'ireo asa noho ny fampifanarahana asa bebe kokoa arakaraka ny fiverenan'ny firenena any amin'ny birao.
Ny fidiran'ny TUI teo aloha teo amin'ny tsenan'ny asa dia nahita fa lasa mpitarika tsena voalohany izy io.
Miaraka amin'ny fangatahana fitsangantsanganana andrasana hiverina miadana, ny TUI dia mitodika any amin'ny tsena hafa toa ny firoboroboana ho an'ny dia lavitra miaraka amin'ny traikefa miasa lavitra satria mamoaka fonosana 'workation' vaovao amin'ny fangatahana ho lasa mpamatsy ity serivisy fitsangatsanganana vaovao ity.
Noho ny areti-mandringana miasa ao an-trano dia efa fanao mahazatra ho an'ny maro izao ary mety hiakatra ho malaza ny asa satria betsaka kokoa ny fahafaha-miasa ampidirina rehefa miverina any amin'ny birao ny firenena.
Tui dia nahatsikaritra io fironana mitombo io eo am-piandohana ary namolavola ny fonosany miaraka amin'ireo zavatra ilaina amin'ny asa lavitra toy ny Wi-Fi sy ny sehatr'asa natokana ho an'ny 30 amin'ireo hotely manerantany. Ny fiasana lavitra dia mety ho lasa lalandava ho an'ny maro, ary ny fidiran'ny TUI mialoha ny tsenan'ny asa dia mety ho lasa mpitarika tsena voalohany.
Ny valim-pifidianana vao haingana dia naneho ny safidiny avo lenta kokoa amin'ny fitsidihana vitsy kokoa any amin'ny birao aorian'ny COVID-19 miaraka amin'ny 29% amin'ireo mpamaly manerantany izay maniry ny hitsidika ny birao isam-bolana, na telo volana, na rehefa angatahan'ny fitantanana. Ny iray hafa amin'ny dimy (21%) dia tsy te-hitsidika ny birao intsony.
Ny fiovana amin'ny asa lavitra sy ny safidin'ny olona mitsidika ny birao dia tsy mampiseho matetika ny fahafaha-manao tsena tsara Tuifonosam-piasana. Ny valanaretina COVID-19 dia nanery ny hiasa lavitra amin'ny ankamaroan'ny mpiasan'ny birao, ary ny fiovan'ny toe-tsain'izy ireo dia manasongadina ny faniriana hitazona ny fandaminana ankehitriny. Betsaka no ho kivy mafy ny handositra, ary ny fiovana ny toerana dia afaka manome tosika ny famokarana.
Ny valim-panadihadiana mivantana iray dia nahitana fa ny 45% amin'ireo namaly dia nilaza fa ny fahafaha-manao tsara kokoa hifantohana dia antony iray hitazonana ny asa lavitra. Ny fialana amin'ny asa dia hanome traikefa amin'ny asa lavitra vaovao lavitra ny fanelingelenana ao an-trano ary miaraka amin'ny fisakafoana misy ao anatiny, ny mpiasa dia afaka mifantoka amin'ny asa tsy misy enta-mavesatra amin'ny adidy isan'andro.
Tui no mpandraharaha fitsangatsanganana voalohany manolotra fonosana manokana ho an'ny mpiasa lavitra. Na dia nanolotra fonosana mitovy amin'izany aza ny vondrona hotely sasany Tui, ny ankamaroany dia nanolotra ny fampiasana andro fotsiny ny efitrano. Ny mpandraharaha ny fizahan-tany dia nanambatra ny fepetra ilaina amin'ny asa lavitra ary ny fialan-tsasatra amin'ny hotely.
Miaraka amin'ny fangatahana fitsangantsanganana antenaina fa handany fotoana hiverenana, dia mety handoa izany ny tanjona amin'ny fitomboan'ny fangatahana miasa lavitra amin'ny alàlan'ny fanolorana fonosana fiasana Tui ary tohano ny fiverenana haingana amin'ny fidiram-bola mialoha ny COVID ho an'ny mpandraharaha fizahan-tany.